RASMI: FA-ga England Oo Ansixiyay Sharci Cusub Oo Ganaax Loogu Soo Rogayo Ciyaartoyda Qarsoorka Ku Qiyaanta Rekoodhe Ay Istuureen. - Laacib.net
RASMI: FA-ga England Oo Ansixiyay Sharci Cusub Oo Ganaax Loogu Soo Rogayo Ciyaartoyda Qarsoorka Ku Qiyaanta Rekoodhe Ay Istuureen.
Xidhiidhka kubbada cagta Ingiriiska ee FA-ga ayaa si rasmi ah u meel mariyay qorshe sharci oo la darsamayay kaas oo ciqaab adag loogu soo rogayo ciyaartoyda xerada ganaaxa isku dhex tuurta si ay rekoodhe ugu guulaystaan. Laga bilaabo xili ciyaareedka cusub ee 2017/18 waxaa si rasmi ah u dhaqan gali doona sharci cusub oo ganaax loogu soo rogayo ciyaartoy kasta oo ay ku cadaato in uu xerada ganaaxa dhexdeeda quusay ama uu isku dhex tuuray.
Kadib markii uu xidhiidhka kubba cagta Ingiriiska ee FA-gu maanta ka dooday isla markanaa uu la tashaday cidkasta oo ay khusayso arintani ayaa la go’aamiyay in ciyaartoyga isku daya in uu khimeeyo garsoorka isla markaana sifo sharci daro ah ku raadiya rekoodhe in ganaax la duldhigi doono iyada oo waliba loo mariyo hab muuqalkiisa dib loo daawanayo si la mid ah qaabka haddaba loogu ganaaxo ciyaartoyda qalad wayn samaysa ee aanu garsooruhu arkin.
Bishii April ayay dhacdooyin waa wayni gilgileen kubbada cagta England kadib markii Marcus Rashfrod, Leroy Sane iyo Harry Kane lagu eedeeyay in ay quuseen oo ay rekoodhe ku dooneen sifo sharci daro istuurid ah, taas oo keentay in la dardar galiyo qorshahan hadda la ansixiyay ee lagu daryeelayo daacadnimada iyo nadiifnimada kubbada cagta England si meesha looga saaro cadaalad darada iyo khiyaanada.
FA-ga ayaa qoraal dheer oo uu soo saaray ku sheegay in la samaynayo guddi ka kooban saddex qof oo kala ah hal garsoore hore oo kubbada cagta England ka soo shaqeeyay, hal tababare oo hore uga soo shaqeeyay Premier Leaque-ga balse aan haddaba wax koox ah ka shaqayn si la mid ah ciyaartoy hore oo Premier Leaque-ga ka soo ciyaaray.
Saddexdan qof ayaa la si gooni-gooni ah loogu dhiibi doonaa wax kasta oo muuqaal ah oo la xidhiidha dhacdada la baadhayo wuxuuna midkastaaba soo gaadhi doonaa go’aanka uu arko in uu yahay kan ugu saxsan. Waxayna go’aankooda iyo talada uu mid kastaaba soo gaadhaa ku soo dhamaan doontaa FA-ga oo go’aamin doona haddii ciyaartoyga istuurista lagu eedeeyay uu khiyaano sameeyay iyo in kale.
Marka tababaraha hore, garsooraha hore iyo ciyaartoyga hore taladooda bixiyaan waxa uu FA-gu go’aankiisa gaadhi doona ka hor inta aan la ciyaarin kulamada soo socda si ciyaartoygan loo ganaaxo haddii uu danbigu ku cadaado. Baadhitaanka kiiskan muuqaalka lagu daba galayo ciyaartoyda istuurta si ay rekoodhe u helaan ayaa meesha ka saari doonta murankii badnaa ee laysku qabsan jiray in ciyaartoyda qaar caadaysteen in ay rekoodhe been ah raadiyaan iyada oo haddii ay dhacdo ganaax la dul dhigi doono.
Ciyaartoyga ay ku cadaato in uu si dhab ah isku tuuray si uu rekoodhe ugu guulaysato waxaa lagu ganaaxi doonaa laba kulan. Guddida joogtada ah ee madaxa banaan ee FA-ga ayaa go’aanka ugu danbaysta ah gaadhi doona waxayna kulamo kasta ka hor gaadhi doonaan go’aanada kiiskan la xidhiidha haddii ay jiraan dhacdooyin la daba galayaa.